लगातार फिल्म फ्लप हुन थालेपछि निर्देशक/निर्माताहरू निर्माणको विषयमा विविधता खोज्न थालेका छन्। यतिबेला डबिङ भइरहेको फिल्म 'दी रेन्ज' गौतम बुद्धको अलौकिक शक्तिमाथि बनाइएको छ। फिल्ममा साधारण मानिसलाई प्राप्त दैविक शक्तिको प्रयोग देखाइएको छ।
गायिका निशा सुनारको हट आइटममात्रै होइन, अभिनेत्री दीपा थापाको जवानीको मात पनि फिल्ममा समेटिएको छ। दीपाका साथै फिल्ममा राज क्षितिज, लोकेन ओली, गणेश उप्रेती, सुनीता आचार्य, सुजन वन, विश्व पाण्डे, सीताराम चौधरीले अभिनय गरेका छन्। फिल्मको निर्देशन राम नेपालले गरेका हुन्।
अपराधीलाई रोल मोडल बनाउने?
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख पुष्कर कार्कीसँग चरी मारिएको घटनाबारे गरिएको कुराकानी– दिनेश अधिकारीको घटना के हो? यसभन्दा अगाडि घटनाबारे प्रहरीबाट जे सार्वजनिक भएका छन्, त्यही हो। भन्नाले? आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय व्यक्तिहरू उपत्यकामा सक्रिय...
'मेरा कमजोरी नै मेरा हतियार'
अनु शाहले १८ वटा फिल्म र सयभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकिन्। व्यस्त हिरोइनमा पर्छिन् उनी। तर, कामअनुसार उनको नाम चर्चामा छैन। धेरैले चियोचर्चाे गरिरहने फिल्म क्षेत्रमा उनका बारे 'गसिप'...
महत्वपूर्ण वैशाख १
वैशाख १ लाई विशेष दिन मान्न लागेको २०७२ वर्ष मात्रै हुँदै छैन। विक्रम संवत्को प्रवर्द्धन हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यस दिनलाई महत्व दिइन्थ्यो। सूर्यको चक्रमा आधारित यो दिनको खास अर्थ छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको साप्ताहिक प्रकाशन शुक्रवार पाँचौँ वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। शुक्रवारको वार्षिकोत्सव तथा नयाँ वर्ष २०७३ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठक, लेखक, स्तम्भकार, विज्ञापनदाता, वितरक, विक्रेता...